Hlala kamnandi endlwini yakho
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMats
Wamkelekile ngokufudumeleyo kwi-Ekeby ethandekayo, idolophu encinci ekumntla-ntshona weSkåne. Malunga nama-3,500 abantu abakubudala obuxubeneyo bahlala apha, ikakhulu kwiivillas kodwa nakwezinye iiflethi kunye neefama.
Kwidolophana kukho, phakathi kwezinye izinto, ivenkile yokutya enoluhlu olubanzi, i-kiosk enokutya okukhawulezayo kunye ne-pizzeria.Enye yeevenkile ezinkulu zefanitshala yabucala yaseSweden ikwalapha, inendawo yokutyela ebonelela ngesidlo sasemini, iisandwich kunye namaqebengwana. Kukho iziko lezempilo apha kwaye evenkileni sifumana i-assortment encinci yempahla yekhemesti.
Ngaphandle kwelali kukho indlu yeplanga epeyintwe emnyama kwinqanaba elinye. I-83 sqm enkulu, eyakhiwe ngo-2018.
Ngaphakathi ekungeneni kukho ivestibule, enendawo eninzi yokuxhoma iimpahla kunye nezihlangu.Phantsi kukho umgangatho ongwevu welaminate kwaye iindonga zipeyintwe mhlophe kwikhaya lonke.
Ngaphezulu kwikhitshi kunye negumbi lokuhlala kwiplani yomgangatho ovulekileyo.Ikhitshi linezinto ezininzi ezifunekayo, yaye kwitafile yokutyela kukho indawo yabantu abathandathu.
I-TV iyafumaneka, ngoqhagamshelo lwe-Wi-fi.
Kukho amagumbi amabini okuphumla, elinye linebhedi ephindwe kabini kunye nelinye elineebhedi ezimbini zomntu omnye.Idesika encinci yokwenza umsebenzi wesikolo okanye ukubhala iiposikhadi zezalamane kwelinye lamagumbi okulala.
Igumbi lokuhlambela lifakwe iithayile ngokupheleleyo, kunye neshawari emva kodonga lweglasi. Iwasha kunye nesomisi zikhululekile ukuba zisetyenziswe, kodwa kunye ne-detergent yazo.
Ukusuka ekhitshini nakwigumbi lokuhlala ufikelela kwindawo yabucala, elungele ukuphucula i-tan yakho, ukufunda incwadi okanye ukuyibamba ngengokuhlwa yebarbecue kunye nento entle yokusela ngeglasi.Isakhiwo sikhulu, i-1,166 sqm, kwaye kukho indawo eninzi yabantwana abanemilenze ebalekayo kunye nokupaka imoto.
Kwabo bafuna ukushiya imoto baye kwi-adventure, indawo yokumisa ibhasi ingaphantsi kweemitha ezilikhulu.Ibhasi iyahamba isiya eHelsingborg, Landskrona naseBjuv, phakathi kwezinye.
Indawo inika kuphela ikota yokuqhuba ukuya eHelsingborg, kwaye udlulela eHelsingör, eDenmark, ukusuka apho kuthatha enye imizuzu engama-20 ngeenqanawa zeScandlines.Ukuba ukhetha ukuhambisa imoto ngaseMalmö, kuthatha nje isiqingatha seyure apho.
Kwabo bathanda indalo, iSöderåsen entle iyatsala.Apha unokuhamba ngeenyawo, ibhayisekile, ukhethe amaqunube okanye amakhowa. Kukho iindawo ezintle zokonwabela ukuzola, ukuya kuloba okanye ube nepikiniki nawe.Kwabo banomdla wokuhamba ngemoto, iRing Knutstorp ifikeleleka lula- iziko elisemazantsi eSweden lemidyarho kunye nokuthanda iimoto. Ukuba ukhetha ukuya kwigalufa, sineSöderåsens Golfklubb kunye neWärdshus kwindawo ekufutshane.
Xa kuvuthuza umoya, kulula ukufumana iilwandle ezintle. Kulo lonke unxweme olusentshona kukho amatye amancinci anobungakanani obahlukeneyo kunye nenani labakhenkethi.
Kwabo bakhetha ukuchitha iivenkile zasemva kwemini, indawo yokuthenga yeVäla ikumgama oziikhilomitha ezimbalwa kuphela.
4.98 ·Izimvo eziyi-51
4.98 · Izimvo eziyi-51
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi51
Umbuki zindwendwe ngu- Mats